११६१ विन्दुसम्म पुगेको परिसूचक पाँच दिनमा ११३४ विन्दुमा ओर्लियो | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण ११६१ विन्दुसम्म पुगेको परिसूचक पाँच दिनमा ११३४ विन्दुमा ओर्लियो
on: March 24, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
शिवम् सिमेण्ट र यूनिर्भसल पावरको पहिलो दिनमा नै घटेर सर्किट ब्रेक
चैत १०, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो दिन कारोबार भएदेखि घटेको नेप्से परिसूचक अन्त्यसम्म ५ दशमलव ७८ अंकले घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएका दश समूहको परिसूचकमा जलविद्युत समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत घटेर १ हजार १३४ दशमलव ८० विन्दुमा पुगेको छ ।
फागुन १९ गते १ हजार १ सय विन्दुमा पुगेपछि निरन्तर ६ दिन बढेर १ हजार १६३ विन्दुसम्म पुगेको थियो । सो विन्दुमा पुगेपछि लगानीकर्ताहरु नाफा बुक गर्नतर्फ लागेपछि बजार घट्न पुगेको थियो । चैत ४ गतेदेखि निरन्तर घटेको परिसूचक आइतवारसम्म घट्नेक्रम रोकिएको छैन ।
प्यानको विषयमा नबुझाई प्रतिपटक रू. ५ लाखको कारोबारमा प्यान अनिर्वाय गराउने सूचना दिएसँगै बजार घट्न पुगेको एक लगानीकर्ताले बताए । लगानीकर्ताका अनुसार प्यानबाट शेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताहरुको लागि हुने फाइदा र यसबाट कारोबार गर्दा पाइने सुविधाको कुरा प्रस्ट नगरी प्यानलाई अघि सारेपछि लगानीकर्ताहरुले सम्बोधन नगरेको हो, शेयर बजार घटबढ हुने भएकाले घट्नु कुनै नौलो कुरा नभएको र शेयरबजार आन्दोलित हुँदै गएकाले तथा नियामक निकाय एक नभएकाले लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई पनि आत्मबल नबढेको हो । जसले गर्दा बजार दिनहुँ घट्न पुगेको छ ।
आइतवार रू. २३ करोड २४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलानमा कारोबार रकम रू. ४ करोड घटेको हो । बिहीवार रू. २३ करोड २४ लाखको शेयर कारोबार भएको थियो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव १७ अंकले घटेर २ सय ४१ दशमलव २९ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार भएकै दिन शिवम् र यूनिर्भसलको शेयरमा घटेर सर्किट ब्रेक
आइतवार शिवम् सिमेण्ट र यूनिर्भसिलपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले घटेर सर्किट लागेको छ । शिवम्को शेयर मूल्य घटेपछि रू. ४१८ मा करोबार भएको छ । प्रिमियमा आईपीओ निकालेको शिवम् सिमेण्टको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भएसँगै पहिलो पटकमानै विक्रीकर्ता आएपछि शेयर मूल्य घट्न पुगेको हो । कम्पनीको शेयरमा खरीदकर्ताभन्दा विक्रीकर्ताहरुको संख्या बढेपछि शेयर किन्नेको संख्या कम थियो । त्यस्तै, आईपीओ सूचिकृत भई दोस्रो बजारमा कारोबार भएको यूनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले घट्न पुगेको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य घटेपछि रू. २७० मा कारोबार भएको छ ।
कम्पनीको शेयर विक्री गर्नेको संख्या अधिक हुँदा खरीद गर्ने नआएपछि शेयर विक्री नभएको गुनासो समेत लगानीकर्ताहरुले गरेका थिए । तर यि दुबै कम्पनीको शेयर भएका लगानीकर्ताहरुले शेयर विक्री पछि नाफा बुक गरेका छन् । १ सय ६६ कम्पनीको कारोबारमा ३८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १०५ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २३ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । नागवेली लघुवित्तको शेयर मूल्य ३ दशमलव ३९ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ६१० मा कारोबार भएको छ ।
केही दिनदेखि बढेर सर्किट लागेको आशामा आए विक्रीकर्ता
केहिदिनदेख लगातार १० प्रतिशतले बढेर पहिलो कारोबारमा नै सर्किट लागेको आशा लघुवित्तको शेयर मूल्य बढेर रू. ५५५ पुगेपछि विक्रीकर्ता आएका हुन् । यस दिन कम्पनीको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ४९२ मा रू. १ करोड ५५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । कम्पनीको शेयर विक्री गर्न आवेदन आइतवारदेखि आएकाले सर्वाधिक शेयर कारोबार हुन पुगेको हो । दोस्रोमा सिद्धार्थ बैंकको संस्थापक तर्फको प्रतिकित्ता रू १ सय ६५ मा रू. १ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नेप्से १२५९.०१ विन्दुमा, परिसूचक बढेर बन्द भएपनि कारोबार रकममा भने कमी